Vicente Espinel uye yegumi spinel, dzimwe ngano uye zvimwe chokwadi | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Type, Mabhuku, Nhetembo
MuSpain neLatin America, Vicente Espinel chirevo chinosungirwa mumunda wemimhanzi uye chirevo chakakurumbira. Kwete zvishoma, musiyano waakaita wechigumi akashandira zviuru zvevanyori nevanyori kunyora kuburitsa manzwiro avo akadzika. Simba remupiro wake riri mukureruka uye kuomarara kwepfungwa.
Nekudaro, kune zvakawanda nhema zvinokomberedza chimiro chake. Zvinhu izvo, kubva mukudzokororwa zvakanyanya, zvakatorwa zvechokwadi. Pano isu tichaedza kujekesa zvimwe, uye, chokwadika, musuwo unosiiwa wakavhurika kune chero munhu anoda kupa zvipo zvake.
1 Mibvunzo inomuka yakatenderedza Espinel
2 Izvo zvinhu zvitatu zvinotaurwa nevazhinji nezve Espinel
3 Kujekesa zvishoma zvinotaurwa
3.1 Chii chinonzi chegumi?
3.2 Kuzivikanwa kwechimiro chedetembo chakarongwa nespinel, iyo "spinel"
3.2.1 Iyo yekupedzisira poindi (.)
3.3 Dzimwe dzimwe mhando dzegumi
3.4 Espinel nevabereki vake vaviri vakuru
3.4.1 Lope de Vega kuonga
3.4.2 Mutengo weCervantes
3.5 Izvo chete gumi gumi dzinozivikanwa dzegumi dzeEspinel
3.5.1 Vaviri vakazvipira "Kuna Don Gonzalo de Céspedes y Meneses", iyo yaiverenga seizvi:
3.5.2 Uye iwo masere spinels eakasiyana maRhymes
Mibvunzo inomuka yakatenderedza Espinel
Kuongorora chimiro chaEspinel, hazvigoneke kuti iyi mibvunzo isamuke:
Ko Espinel aive Inventor wegumi here?
Ko spinel fomula yaive zano rake here?
Akanyora mangani maspinera?
Nei iine mukurumbira?
Ndichaedza kupindura zvirahwe izvi.
Izvo zvinhu zvitatu zvinotaurwa nevazhinji nezve Espinel
Zvakajairika kunzwa nezve nhetembo zviitiko zveVicente Espinel. Ivo vanowanzo dzokororwa pakati pe decimistas uye vanoyemura nyanduri. Vazhinji vanodanidzira vachiti:
«Espinel iguru! Akasika chegumi!
Vamwe vanodanidzira vachiti:
«Espinel iguru! Akagadzira yegumi spinel!
Vamwezve vanodzokorora zvinonzwika.
«Akanyora zviuru zvegumi! Ndiyo yakanakisa! ".
Aya nemimwe mitsara yakawanda iwe yaunogona kunzwa mukuungana uye kuungana kweamateur. Izvo zvinodzokororwa zvakare nevanhu vakadzidziswa mune iyi nyaya. Nekudaro, kana zviri zvirevo zvitatu zvataurwa pano - kunyangwe maviri ekutanga anoita kunge akafanana, uye iwo matatu echokwadi - maviri ane nhoroondo zvisirizvo. Uye hongu, ivo chibereko chekudzokorora, kugamuchirwa kwematanho nekuda kwekushomeka kwekugadzirira uye yakafanana mifananidzo inozivikanwa.
Kujekesa zvishoma zvinotaurwa
Mutsara wekutanga hauna kunaka. Espinel haana kugadzira chegumi. Ichi chimiro chedetembo chaivapo makore apfuura, asati atombozvarwa. Mutsara wechitatu haunawo kunaka. Espinel haana kunyora zviuru zvegumi. Muchokwadi, haina kana kusvika zana. Asi, ivo vanoshamisika:
"Uye ndiani akatanga chegumi?"
"Espinel akanyora zvingani zvegumi?"
Isu tinoenda nezvikamu, kutanga zvinodikanwa kujekesa mazwi.
Chii chinonzi chegumi?
Munhetembo, "chegumi" inongova idanho remitsetse gumi, zvirevo zvisere. Zvichida uye zvakajairika, nenziyo dzinoenderana maererano nanyanduri izvo zvaakaita mukuda kwake nekuita kwake. Nenzira imwecheteyo, kutaura nezve muumbi we "chegumi" kunotyisa uye kunonetsa nekuda kwekushomeka kwezvinhu panguva iyoyo mune izvi. (XIV neXV mazana emakore).
Ichokwadi ndechekuti, zvine hunyanzvi, chegumi, mukati memafomu ayo akajairika, inoumbwa nemaviri «limericks» (miganhu yemavhesi mashanu eunyanzvi hushoma nemitambo yakasiyana). Semuenzaniso: ababacdcdc, uko ndima 5 ne6, zvichiteerana, zvinoshanda sezvibatanidza, zvese kune pfungwa yemeseji iyo nyanduri yaanoda kuburitsa, uye neyemimhanzi kana rwiyo rwenhetembo. Iko kusanganisa kunoratidzwa pano haisiriyo yega iripo. Zvinogona kutaurwa kuti, kune nyanduri wega wega, mhando yegumi.
Kuzivikanwa kwechimiro chedetembo chakarongwa nespinel, iyo "spinel"
Izvo zvakaitika ndezvekuti, nekufamba kwenguva, mamwe mafomu akave akakurumbira kupfuura mamwe, nekuda kwemimhanzi yavo uye mataurirwo. Uye, sezvakaitika kuna Espinel, kunze kwezvinhu zviviri zvataurwa pamusoro apa, zvakakosha kuratidza nguva yezvakaitika maakararama uye vanoyemura - varume vakakurumbira vetsamba - vakamutsigira.
Zvino, "yegumi spinel" ishanduro yenhetembo yakarongwa naVicente Espinel. Saka "spinel." 8 vavo vanoonekwa vakaburitswa mubhuku rake Mitambo yakasiana-siana. Iyi poetic fomu ine inotevera rhyme chimiro abba.accddc. Bhii rega ndiro syllable yekupedzisira yendima yega yega, uye nekudaro rwiyo.
Iyo yekupedzisira poindi (.)
Iwe unozogona kukoshesa pano, kunze kwerino rwiyo rwakakurumbira rwakawanikwa naEspinel uye usingaonekwe pamberi pechipo chake, chimwe chikamu: yapfuura ndima yechina, uye haisi typo, pane nguva. Izvi zvinoiswa zvachose pachinangwa neseva iyi uye munguva yakapfuura naEspinel pachake.
Mutsara Vicente Espinel.
Uye nepo nguva (.) Inoita senge yakapusa uye isina kunyanyisa, yakawedzera simba rakasarudzika uye kuratidza kune iyi nhetembo fomu. Muchokwadi - uye zvakafanira kudzikamisa - kunyangwe zvaive zvine hunyanzvi pachikamu che nyanduri (uye chakasimbiswa nevadzidzi uye nevarume vakuru vetsamba dzekare uye ikozvino), iye, Espinel, pamwe, haana kufanoona kukanganisa yeakataura chiratidzo mamaki mune ramangwana.
Dzimwe dzimwe mhando dzegumi
Kubva payakatanga, dzakasiyana siyana dzegumi dzakazivikanwa. Izvi, hongu, nezve nhetembo yake. Kunyangwe, nhasi ivo vangango kanganwa. Pakati peizvi, tinogona kutumidza zita:
Iyi fomu yekupedzisira inobva kuEspinel, uye zvakare inowanikwa mu Akasiyana Rhymes.
Espinel nevabereki vake vaviri vakuru
Zvino, iyo poindi yakajekeswa, Sei, pakati pevanyanduri vazhinji, yaive musiyano waEspinel wakadzika midzi uye wakapararira? Zvakanaka, ngatiti Espinel akazvarwa aine nyeredzi yerombo rakanaka.
Nyanduri, kunze kwekuve nehunyanzvi uye anofarira kudzidza, ane chikwereti mukurumbira wake uye kupararira kwepasirese kwebasa rake kune mamwe mairi makuru matsamba: Miguel de Cervantes naSawavedra Felix Lope de Vega, uyo, kana achiverenga matinji avo mubhuku Akasiyana Rhymes, vakakatyamadzwa nekuratidzira kwakaitwa nhetembo neshanduko dzakarongwa naEspinel. Zvakanyanya, zvekuti vakamurumbidza pane zvakanyanya mumabhuku ake.
Chinhu chinoshamisira nezve hupenyu, uye zvakanaka kucherechedza, ndechekuti Cervantes naLope de Vega vaivengana, saka zvinogona kunzi ivo vakabatana nekuyemura kwavo Espinel.
Lope de Vega kuonga
Lope de Vega akati mune katatu:
“Zvikudze zvakanaka kubva kumakomo ako eRonda,
nekuti nhasi munzwa wake unova chanza chakachengeteka,
Zita rake ngarivanze ".
Y Cervantes anonyora:
"Ndingataure zvinhu nezveEspinel ane mukurumbira
dzinopfuura kunzwisisa kwevanhu,
yesainzi ayo anoberekera mubhokisi rake
Kufuridzira kwaMwari kutsvene kwaPhoebus.
Asi, nekuti haigone parurimi rwangu
taura zvishoma pane zvese zvandinonzwa,
usataurazve, asi svaira kudenga,
namata utore chinyoreso, namata mbira ».
Izvo chete gumi gumi dzinozivikanwa dzegumi dzeEspinel
Zvino, nezve chegumi chakanyorwa naEspinel - ivo chete vakanyoreswa muzita rake - pane gumi chete.
Vaviri vakazvipira "Kuna Don Gonzalo de Céspedes y Meneses", iyo yaiverenga seizvi:
"Kana paine zvakaipa chete,
Ava, Gonzalo, vakadaro,
Zvakanaka, zvehurwere hwako hunosuruvarisa
iwe unowana kufarira kwakawanda.
Ziva mazamu akasimba,
kana ukaita nhamo ukaita nhumbu,
kuti nematanho ekudenga,
pakati pezvichemo nezvichemo,
nhamo dzaunomhanya nadzo
uye iwe unogamuchira kunaka ".
yekutambudzika kwako ikozvino,
Ndiani akaita kuti uchenjere
asi mabasa ako pachawo?
kuita zvakaipa nzira;
pamwe nekutaura kwako kunosuruvarisa
vachashambadzira pfungwa dzenyu
uye mumakwikwi ese ”.
Uye iwo masere spinels eakasiyana maRhymes
Izvi zvine zita rekuti "redondillas". Nhetembo idzi dzinoumba nhamba makumi matanhatu neshanu dzedzimbo makumi matanhatu neshanu kana kuti "nhetembo" idzo Espinel akaisanganisira pabasa rakakosha kudai. Izvi ndeizvi:
“Hakuna chinhu chakanaka chinondidzivirira pane zvakaipa,
anotya uye achivhunduka,
uye akagumbuka gwara.
Uye kunyunyuta kwangu, zvanyanyisa,
uye chikonzero chinondidzivirira,
zvakanyanya mukukuvara kwangu zvinopisa,
kuti ndiende kunonditadzira;
sembwa iyo ine hasha
zvinogumbura muridzi wayo ”.
"Ikozvino rombo iri, riri kuramba richiwedzera,
akatarisa kudaro munyeredzi,
chii chakaita zvichemo pamusoro pangu
wandinovaumba iye zvino.
Uye ndiyo mhosva, madam,
izvi zvakanaka, izvo zvekufunga,
kuvhiringidzika uye kusuruvara ndinozviwana ini,
ko kana vakandibvunza nezvako
avo vanokanganisa kukanganisa kwangu,
out of sheer shame ndakanyarara ".
"Vanhu vanowanzo kundiudza,
kuti pamwe anoziva zvakaipa zvangu,
ndicho chikonzero chikuru
Ndiri kuzviona zvakanyorwa pahuma yangu.
Uye kunyange ini ndichitamba ndakashinga,
ipapo rurimi rwangu runotsvedza
saka inogadzira uye nuances,
izvo izvo chipfuva chisingashandisi
hapana kunyepedzera kwakakwana
kufukidza nedota ”.
"Kana vakandipa zita, kana ini ndikakudana
Ndinorarama ndakazara nehanya,
nendebvu dzake papfudzi.
Kuti ndinoshamiswa nezvinhu chiuru,
nekuti mune rombo rangu diki
rombo rangu harina chokwadi,
kuti pamwe mitauro inoti,
izvo zvave zvichikonzerwa nekuderedzwa kwayo
yaive nhamo ”.
"Ndiri kuda kukuzivisa."
chokwadi ichi sechapupu,
kupfuura muvengi akaziviswa
Kuti kunyange ndakazvidzwa ndinofa,
kushorwa pasina chikonzero
Haisi, nekuda kwezvange zvichishayikwa mandiri
kuti mukutaura kwedu kwese,
kuravira kwakanaka sokwako
haagoni kunyengedzwa ”.
"Uku kugutsikana chete
Ndine zvakawanda kukuvara zvasara,
izvo hazvina kumboitika mumakore akadaro
chikonzero changu chakakushatirisa.
Zvimwe zvekuwedzera kuda
kuti kana uchida unokwanisa,
asi kune mhosva yakakura kudai
zvakanyorwa zvakaramba zviri zvipenyu,
zvaunouya nazvo kubva paruoko rwangu ”.
"Izvi zvinopa simba kukutenda kwangu
nekuda kwekuyedza kuenderera,
uye tsitsi dzenyu hadzitaure
Handisi kuzonwa mvura iyi.
Zvingave here izvo zvaive
kuti netsitsi dzako ndinotarisira,
uye handizoora mwoyo,
kuti hazvizove zvakanaka kukanda
tambo iri seri kwegate ”.
tsvaga yakanakisa mamiriro
(kana murudo mune mamiriro akanaka).
Kuti chifuva chakarwadza kudaro
kana kurwadziwa hakumutambudzi,
kana kunzwa kurwadziwa, kana kubwinya,
hapana chakanaka kana chakaipa chinomutsigira ”.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vicente Espinel uye yegumi spinel, dzimwe ngano uye zvimwe chokwadi